Chinese Mutungamiri anorumbidza kutanga kweChina-Laos Yekushanya Gore 2019
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » ushanyi » Chinese Mutungamiri anorumbidza kutanga kweChina-Laos Yekushanya Gore 2019
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • China Kuputsa Nhau • tsika nemagariro • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Laos Kuputsa Nhau • nhau • vanhu • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Mutungamiri weChina akatumira meseji yekukorokotedza kuvhurwa kweChina-Laos Yekushanya Gore re2019 muVientiane neChishanu, achiratidza tariro yake yekusimbisa nzwisiso uye hushamwari pakati pevanhu vaviri.
Achiona kuti China neLaos vanowana rutsigiro mune zvematongerwo enyika, kudyidzana kwezvehupfumi pamwe nekusimba kwehukama hwetsika, Xi Jinping akati China inoona Laos semuvakidzani akanaka, shamwari, komuredhi uye mudiwa. Vakatiwo China inoda kushanda nedivi reLaotian kuita zvirinani nzira dzekuvandudza, kusimudzira kubatana paBelt nekugadzira Mugwagwa, uye kusimudzira kudyidzana kweChina-Laos kwakabatana kwekudyidzana kuzadzisa michero mitsva.
China neLaos vese vane tsika dzinoyevedza uye zvakaisvonaka zvinonaka, Xi akadaro. Vanhu venyika mbiri idzi, vachinwa mvura murwizi rumwe chete, vane chishuwo chakasimba chekudzamisa kunzwisisana uye hushamwari, mutungamiriri weChina akawedzera
Xi akati anotarisira kuti nyika mbiri idzi dzichatora mukana wekubata gore rekushanya kuwedzera vanhu-kune-vanhu uye tsika dzekuchinjana, uye kusimbisa ruzhinji nehukama hwenzvimbo yekuvaka nzanga yeChina-Laos yeramangwana rakagovaniswa.
Chibvumirano chekubata China-Laos Yekushanya Gore chakazadziswa panguva yenhaurirano pakati paXi nemutungamiriri weLaotian aishanya Bounnhang Vorachit muBeijing muna Chivabvu 2018.
Mativi ese ari maviri achabata pamwechete kuratidzira, kuita kwehunyanzvi, maforamu, zvirongwa zvekudzidzisa uye zvimwe zviitiko, kusimudzira kunzwisisana uye hushamwari, pamwe nekupa zvipo mukuvaka nharaunda yeChina-Laos yeramangwana rakagovaniswa.